UMandela; I-Moral Voice ye-Afrika
UNelson Mandela wenqaba noma yisiphi isiphakamiso sokuthi wayengumesiya we-Afrika. "Angicabangi ukuthi kufanelekile ukubheka noma ubani oyedwa njengomesiya ozobe engumsindisi wezwekazi," etshela izintatheli ngesikhathi enikezwa ukwamukelwa okukhulu eTunis emhlanganweni wesigodi wonyaka ka-1994.
Inhlangano Yobunye Bama-Afrika (OAU) - ukuvakashelwa kwakhe kuqala kulolo nhlangano njengoMengameli. Kodwa abantu abaningi bambona ngaleyo ndlela.
Ngokungafani nabanye abaholi abaningi emhlabeni wesifundazwe uMongameli Mandela waletha uhlobo lokungcwele ku-kamongameli, wadala ngokukhululeka kwesikhathi eside kakhulu etilongweni futhi wenqaba ukujabulisa noma yikuphi ukufutheka ngabantu abaye bamphoqa ukuba angene kule minyaka engapheli, engakhi.
Ngokungafani nezinye izinhloko zombuso ezihlukumezile ihhovisi labo eliphakeme, zihlanganisa inhlanhla enkulu futhi zizibandakanya ngendlela yokunethezeka, uMengameli Mandela waphila ngokumane futhi wenza isikhundla sakhe sikamengameli indawo yokusiza.
Wakha isiKhwama seMantfwana seMongameli lokhetsekile ngemnikelo wakhe kusukela emholweni wakhe we-R 150 000 (US $ 41 000) ngeminyaka lesihlanu futhi wamema labanye kuthi bahlanganyele ngekukhokha imali lefanako yekungena.
Abamabhizinisi abaningi baye. Ubuye wasebenzisa isisindo sikaMongameli ukuze anikeze amandla emikhankaso eyabangela ukuphumula kwezingane zasesikoleni samabanga aphansi nokuhlinzekwa kokunakekelwa kwamahhala ezibhedlela nasemitholampilo yabomama abakhulelwe nabantwana abancane.
Ingqungquthela e-OAU ehlukanisiwe
Emhlanganweni we-Tunis OAU ngoJuni 1994, intatheli ichaza uMengameli Mandela ngokuthi "izwi lokuziphatha lase-Afrika". Esimweni salo muzi waseNyakatho Afrika kanye nokubusa kwawo okucindezelayo kanye nokugubha kanye nomkhosi womhlangano we-OAU ohlonishwayo, kanye nokuba khona kwabaningi abaholi abacindezelayo nabakhohlakele base-Afrika, ukubizwa kwegama kwakunephuzu. Amaphephandaba abuza ukuthi izithunywa zaseNingizimu Afrika zizama ukuletha ama-OAU izimiso zokuziphatha ezithathwa yiNingizimu Afrika ngokusebenzisa umthethosisekelo omusha ngokugxila ekukhanyeni kuhulumeni kanye nenkululeko yokukhuluma nokunyakaza.
UMengameli Mandela kanye nethimba lakhe ngokuzithoba bahlukumeza lezi zindaba futhi, ngonyaka olandelayo, yena nohulumeni baseNingizimu Afrika baye baqhubeka nezinqubomgomo ezingabhekiswa ngokubanzi ngokuthi "ukungathinteki ezindabeni zangaphakathi zabanye" kodwa ukukhuthaza ukubambisana phakathi kwezizwe.
Nakuba uMongameli Mandela ekhuthaza amazwe ukuba athathe izimiso zenkululeko futhi aphakamise amalungelo abantu, ngesikhathi esifanayo, wayelokhu enganaki ukucindezelwa kwamalungelo abantu, ukubandakanyeka kwezobuphekula njll, ngamazwe asekela i-ANC phakathi neminyaka yawo yokulwa.
Lokhu kwaholela ezikhathini ezinobungqingili ebuhlotsheni baseNingizimu Afrika namazwe aseMelika naseNtshonalanga okwakungamangalela ubungane bukaMongameli waseLibya neLibya, intukuthelo yaseNorth Afrika esolwa ngokubhujiswa kwePan American Airlines "jumbo jet" phezu kweLockerbie eScotland ngo-1988, futhi I-Cuba kaFidel Castro abakwaMelika abakaze bathethelele ngokuvuselela izinzuzo zebhizinisi ezinkulu zase-US ngokungenasiphi isinxephezelo nangokufaka ngasese imicibisholo yenukliya esiqhingini. Amafutha aseNingizimu Afrika asebenzisana ne-Iran nawo adala ukungqubuzana ne-United States.
Amandla amakhulu e-Afrika
Kodwa, naphezu kwalezi zinhlobonhlobo, i-United States ne-Europe babheka kuMongameli Mandela naseNingizimu Afrika ukuba abe amandla amakhulu e-Afrika, umlindi wokuthula kanye nomkhiqizi wezomnotho. Bobabili iMelika neYurophu bathululele izigidi zamaRandi e-Afrika kule minyaka futhi abazange bahlatshwe umxhwele kakhulu ngemiphumela.
Ingxenye ephakeme ngokungapheli yalowo mcebo iye yafika emabhange abo abanye abaholi base-Afrika kuyilapho amazwe abo aqhubeka egoba phansi. Manje, ngenxa yobandlululo lwayo ngemuva, iMelika neYurophu banxusa iNingizimu Afrika ukuba ithathe indima yokuhola kuleli zwekazi. Bangathanda ukubona umthwalo wabo we-Afrika wehlisiwe futhi okuningi kuwo uguqulelwe kwabase-Afrika ngokwabo.
Futhi banikeze ukuthi bangcono kangakanani ukuthatha omunye walo mthwalo kunomengameli Mandela neNingizimu Afrika? Ngesikhathi esifanayo, phakathi kwezizwe zase-Afrika INingizimu Afrika yavela njengethemba le-Afrika. Eziningi zalezi zizwe zazinzima ukufakazela ukubekezela kwabo esikhathini esithathwe ukuze kube nezingxoxo zokuguqulwa eNingizimu Afrika.
UMongameli Mandela wathunyelwa enkambeni yobuholi kuleli zwekazi futhi wasiza ukukhipha imililo eLesotho ngenkathi enza amandla eNigeria, eMozambique nakwamanye amazwe. Kodwa uMongameli Mandela wabona ukuthi ugibe oluhle angangena ngalo - lube uphawu lokusindisa i-Afrika ngenkathi kuqhutshwa umxhwele ekhaya.
Ngakho ngokuhlakanipha wakhetha ukuthatha indima eqaphele e-Afrika ngenkathi ebeka izinkinga zakhe zangaphakathi ngokucophelela.